မျက်မှန် တသက်လုံး လွတ်စေသော ဆေးနည်း ! - Khit Thit Media
မျက်မှန် တသက်လုံး လွတ်စေသော ဆေးနည်း !
မျက်မှန် အဆောင် လွတ်စေသော ခပေါင်းရေကြည်နှင့် ဖန်ခါးသီးအစွမ်း
“̏ ဆရာ မျက်မှန် မပါပဲ လမ်းတွေလျှောက်။ စာတွေဖတ်နဲ့ပါလား˝
“လုပ်ပါဦး ဆေးနည်း ကောင်း˝
“̏ခပေါင်းရေကြည် အခေါက် (၁၀) ကျပ်သားလောက်ကို ထန်းလျက် (၃) လုံး၊ ရေမတ်ခွက် (၉) ခွက်နဲ့ ရောကျိုပြီး အအေးခံတယ်။ ပြီးမှအရည်စစ်ယူပြီး ပုလင်းထဲ ထည့်ထားတယ်။ နေ့တိုင်း လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်တစ်လုံးစာ သောက်တယ်။ ဆေးကုန်ရင် နောက်တစ်ခါစီမံပြီး မပြတ်မှီဝဲ တယ်။˝
“အဲ့ဒါ ဖန်းခါးသီး ကို အမှုန့်လုပ်ထားတာ။ တစ်ပတ် (၂) ကြိမ် ဖန်ခါးမှုန့်နဲ့ နနွင်းမှုန့်စစ်စစ်ကို ရေနဲ့ရောစပ်ပြီး ညအိပ်ချိန်ကွင်းပြီးအိပ်တာပဲ။ မျက်ရည် ပူကျတာ၊ မျက်စိအောင့်တာ၊ အမြင်ဝေဝါး မျက်စိမှုန် တာမဖြစ်တော့ ဘူး။˝
ပင်လတ်မျိုးဖြစ်သည်။ အခေါက် မှာ မီးခိုရောင် ဖြစ်သည်။ အပွင့်သည် ဖြူ၍မွှေးသည်။ အသီးသည် ဆီးဖြူသီးအရွယ်ရှိ၍ မှည့်လျှင် သပြေရင့်ရောင်ဖြစ်ကာ အစေ့တစ်စေ့သာရှိသည်။ အရွက်မှာ ခပေါင်းရွက်နှင့် တူသော်လည်း ခပေါင်းရွက်ထက်များစွာသေးသည်။
ဂုဏ်နှင့်စွမ်းရည်တွင် မျက်စိ ကိုအကျိုးပြုပြီး မျက်စိ ရောဂါ ကို ပျောက်ကင်းစေကာ ရေကိုကြည်လင်စေတတ်သည်။
ခပေါင်းရေကြည်စေ့ ကို သွေး၍ မျက်စိကွင်းပေးလျှင် ထို ရောဂါ ပျောက်သည်။ အခြားသော မျက်စိ နာဟူသမျှ ထိုနည်းအတိုင်းပြုလုပ်ပေးပါက ပျောက်ကင်းသည်။
ခပေါင်းရေကြည်စေ့ ကို သွေး၍ မျက်စိ ကွင်းပေးပါက မျက်စိ မှုန်ဝါးခြင်းကင်း၍ အမြင်သန်လာပါလိမ့်မည်။
ယင်းအစေ့ကို ပျားရည်နှင့်သွေးကာ မျက်စိ အားကွင်းပေးပါက မျက်စိတိမ်သလာရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။
ခပေါင်းရေကြည် နှင့်ပတ်သက်ပြီး အခြားပျောက်ကင်းစေသော ရောဂါများလည်း ရှိနေသေးပါသည်။ အဓိက မျက်စိရောဂါကို ပျောက်ကင်းကြောင်း အရှင်နာဂသိန်ဆေးကျမ်းတွင် ညွှန်းဆိုသည်။
Credit: ယမင်း ဖြူ
မကျြမှနျ အဆောငျ လှတျစသေော ခပေါငျးရကွေညျနှငျ့ ဖနျခါးသီးအစှမျး
“̏ ဆရာ မကျြမှနျ မပါပဲ လမျးတှလြှေောကျ။ စာတှဖေတျနဲ့ပါလား˝
“လုပျပါဦး ဆေးနညျး ကောငျး˝
“̏ခပေါငျးရကွေညျ အခေါကျ (၁၀) ကပျြသားလောကျကို ထနျးလကျြ (၃) လုံး၊ ရမေတျခှကျ (၉) ခှကျနဲ့ ရောကြိုပွီး အအေးခံတယျ။ ပွီးမှအရညျစဈယူပွီး ပုလငျးထဲ ထညျ့ထားတယျ။ နတေို့ငျး လကျဖကျရညျ ပနျးကနျတဈလုံးစာ သောကျတယျ။ ဆေးကုနျရငျ နောကျတဈခါစီမံပွီး မပွတျမှီဝဲ တယျ။˝
“အဲ့ဒါ ဖနျးခါးသီး ကို အမှုနျ့လုပျထားတာ။ တဈပတျ (၂) ကွိမျ ဖနျခါးမှုနျ့နဲ့ နနှငျးမှုနျ့စဈစဈကို ရနေဲ့ရောစပျပွီး ညအိပျခြိနျကှငျးပွီးအိပျတာပဲ။ မကျြရညျ ပူကတြာ၊ မကျြစိအောငျ့တာ၊ အမွငျဝဝေါး မကျြစိမှုနျ တာမဖွဈတော့ ဘူး။˝
ပငျလတျမြိုးဖွဈသညျ။ အခေါကျ မှာ မီးခိုရောငျ ဖွဈသညျ။ အပှငျ့သညျ ဖွူ၍မှေးသညျ။ အသီးသညျ ဆီးဖွူသီးအရှယျရှိ၍ မှညျ့လြှငျ သပွရေငျ့ရောငျဖွဈကာ အစတေ့ဈစသေ့ာရှိသညျ။ အရှကျမှာ ခပေါငျးရှကျနှငျ့ တူသျောလညျး ခပေါငျးရှကျထကျမြားစှာသေးသညျ။
ဂုဏျနှငျ့စှမျးရညျတှငျ မကျြစိ ကိုအကြိုးပွုပွီး မကျြစိ ရောဂါ ကို ပြောကျကငျးစကော ရကေိုကွညျလငျစတေတျသညျ။
ခပေါငျးရကွေညျစေ့ ကို သှေး၍ မကျြစိကှငျးပေးလြှငျ ထို ရောဂါ ပြောကျသညျ။ အခွားသော မကျြစိ နာဟူသမြှ ထိုနညျးအတိုငျးပွုလုပျပေးပါက ပြောကျကငျးသညျ။
ခပေါငျးရကွေညျစေ့ ကို သှေး၍ မကျြစိ ကှငျးပေးပါက မကျြစိ မှုနျဝါးခွငျးကငျး၍ အမွငျသနျလာပါလိမျ့မညျ။
ယငျးအစကေို့ ပြားရညျနှငျ့သှေးကာ မကျြစိ အားကှငျးပေးပါက မကျြစိတိမျသလာရောဂါ ပြောကျကငျး၏။
ခပေါငျးရကွေညျ နှငျ့ပတျသကျပွီး အခွားပြောကျကငျးစသေော ရောဂါမြားလညျး ရှိနသေေးပါသညျ။ အဓိက မကျြစိရောဂါကို ပြောကျကငျးကွောငျး အရှငျနာဂသိနျဆေးကမျြးတှငျ ညှနျးဆိုသညျ။
Credit: ယမငျး ဖွူ
Previous Article တာမွေလူသတ်မှု နောက်ကွယ်မှ တကယ့်ဇာတ်လမ်း
Next Article ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရင် ဒီအချက်တွေ သိထားသင့်ပါတယ်